काजकिरिया भएका व्यक्ति २२ वर्षपछि जिउँदै भेटिए « News from Nepal as it happens | Nayakhabar.com
मृत्यु भइसकेको ठानेर काजकिरिया गरिएका लोकबहादुर जीवितै हुन् । सबैले मृत्यु भइसकेको भन्न थालेपछि परिवारले उनको काजकिरिया गरेको थियो । जानकारी नै नदिई घर छाडेर हिँडेका लोकबहादुरले पनि लामो अवधिमा परिवारलाई चिठी, फोन र सम्पर्क समेत गरेनन् । मृत्यु भइसकेको ठानी काजकिरियासमेत गरिएका रुकुम मुरु-३ का ५९ वर्षीय लोकबहादुर पुन २२ वर्षपछि घाइते अवस्थामा परिवारको सम्पर्कमा आएपछि नेपालगन्जस्थित वेस्टर्न अस्पतालमा उपचार गरिँदै छ ।
२२ वर्षपछि बुवा भेटिनुभो, पत्याउनै मुस्किल परिरहेछ,’ संगीता(लोकबहादुरको छोरिले) भनिन्, ‘म सानै छँदा बेपत्ता हुनुभएको थियो, मैले जान्ने/बुझ्ने भएपछि पहिलोपल्ट बुवाको मुख देखें ।’ बिरामी अवस्थामा परिवारको सम्पर्कमा आएका लोकबहादुरको नेपालगन्जस्थित वेस्टर्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । भारत हिमाञ्चल प्रदेशको सिमला जिल्लामा पर्ने गाउँमा मजदुरी गर्ने क्रममा लोकबहादुर डेढ महिनाअघि भीरबाट लडेर घाइते भएका थिए । उनको दाहिने खुट्टा दुई ठाउँमा भाँचिएको छ । घाइते लोकबहादुर भारतकै अस्पतालमा बेवारिसे भेटिएपछि भारतीय प्रहरीले अखिल भारत-नेपाली एकता मञ्चसँग सम्पर्क गरी फर्काएको हो ।
4 Responses to “काजकिरिया भएका व्यक्ति २२ वर्षपछि जिउँदै भेटिए”
Om Rana says:	July 10, 2012 at 11:52 am	यो बिचारलाई हेल्प गर्नु पारो नेताजीहरु. कानमा oil लगार नाबसम.
मन परे हरियो, नपरे रातो 15 28
Reply	ganga grg says:	July 10, 2012 at 4:57 pm	यो सुन पुन हैन गू पुन हो, कसरि मन बाध्न सके होला, यो बज्जिया पक्का पनि सुर र सुन्दरी मा बेपत्ता भएको हुनु पर्छ.यसको उता पनि जै जहान हुनु पर्छ, हाल कामै न्लाग्नी हालत म बल्ल नेपाल सम्झियो.
Reply	Yuvraj ChhetriUSA says:	July 10, 2012 at 11:19 pm	मलाई माथि गंगा जीउले लेखेको कुरा मोन पर्यो – यो साचिकै मरेको हो , जब उमेर छदा फुत्त घरबाट कसैलाई नभनी सुइकुचा ठोक्यो, फेरी आज कसैले नहेर्ने आवस्थामा पुरानो घरमा आउनु पर्यो, येस्तालाई फेरी मारेर क्रिया गर्दा केहि पनि हुदैन होला .
भोलि एसका परिवारहरु भोकमरीमा बाउ खोज्दै आउलान जस्तो छ . कहाँ कतिजना छन् कसैलाई थाहा छैन , कतिजना श्रीमतीहरु होलान ? यी सबै कुरा फेरी सोच्ने बेला भएको छ – छोरी संगीताले .
Reply	Babu Lamichhane says:	July 18, 2012 at 8:14 pm	दुर्गमको लाटो सोझो मान्छे अनपढ बुद्दी के सोच्यो जहाँ पुग्यो त्यही बस्यो जब काम गरेर खान नसक्ने भयो त्यस पछी सबैको बोझ बन्यो र घर आयो त्यो पनि अरुको सहयोगमा बिचरा ! कुनै घोर अपराधी त होइन नि पीडित हो सहयोग गरेर स्थापित गराइदिनु पो पर्छ त मित्रहरु के भन्नु भएको त्यस्तो ! फेरी मार्ने र किरिया गर्ने बिचार सार्थक छ र ? त्यो परिवारको ठाउँमा एक्छिन आफुलाई कल्पना गर्नुस् त !
Recent Posts	संयुक्त सैनिक सगरमाथा आरोहणमा..
“खिलराज रेग्मी शुसासनको मजाक उडाउने पात्रको रुपमा स्थापित”:शंकर पोख्रेल
अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण हत्यागर्ने धम्की(जातीय विभेद किन)